सन् २०२० मा ८० प्रतिशतले घटे पर्यटक « sarbapriyanews.com
सन् २०२० मा ८० प्रतिशतले घटे पर्यटक
प्रकाशित मिति : १९ पुष २०७७, आईतवार ०९:१६
काठमाडौं । सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा २ लाख ३० हजार पर्यटक मात्र आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अपेक्षाविपरीत पर्यटक आगमन घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष पर्यटन आगमन ८० प्रतिशतभन्दा धेरैले खस्किएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यो संख्या सन् २०१८ मा ११ लाख ७२ हजार ७२ थियो ।
कोभिडको संक्रमणले विश्व समुदायलाई प्रभाव पर्दा भ्रमण वर्षले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई कठिन भयो । भूकम्पपछि बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको पर्यटन कोरोनादमहामारीले एकैपटक थला पर्‍यो । कोभिडकै कारण गत वर्ष नेपालले अन्तरराष्ट्रिय उडानमा ९ महीनाभन्दा बढी समय प्रतिबन्ध लगाउँदा पर्यटक आगमन ठप्प बनेको थियो ।
अध्यागमन विभागका अनुसार २०२० मा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट २५ हजार ३२० जनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यसपछि चीनबाट ९ हजार ८०८ जना, अमेरिकाबाट ९ हजार ६८२ जना, थाइल्यान्डबाट ९ हजार ५१८ जना र म्यान्माबाट ९ हजार ४०० जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यसमध्ये हवाई मार्ग त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थबाट १ लाख ८३ हजार १३० जना पर्यटक नेपाल आएका छन् भने स्थलमार्ग हुँदै ४६ हजार ९५५ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
सरकारले सन २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्ष नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । कोरोना महामारीकै कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन अझै केही वर्ष लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको धारणा छ । सन् २०२० लाई असामान्य अवस्था भन्दै उनीहरूले अब स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कोभिडकै कारण पर्यटक आगमनमा कमी आए पनि सन् २०२० मा भएका केही भीआईपीहरूको नेपाल भ्रमणले आउने दिनमा बाह्य पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिने पर्यटन व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियानमा लेखिएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति ममनुन हुसेनको निधन
‘ओली विश्वास गर्न लायक पात्र होइनन् त्यसैले उनका आश्वासनलाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन’
भेरीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेमा एमाले नेता रावत नेतृत्व
एकै दिनमा ह्वात्तै बढयो कोरोना संक्रमणदर, यति धेरैजना सन्क्रमित भेटिए
श्रमिकको ज्याला वृद्धि, कति भयाे ?
विश्वभर तीन अर्ब ८८ करोड ५६ लाख ३१ हजार २३२…
१२ वर्षीय बालकले गरे आफ्नै दिदीको बलात्कार
पेट्रोलियम पद्धार्थ बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना
किसान लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्दै, अंकित दर कति ?
फेरि मनसुन सक्रिय, यी प्रदेशमा ‘भारी’ वर्षाको सम्भावना सतर्क रहन…
आज दिउँसो यी प्रदेशमा ‘भारी’ वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
सकियो नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक, भयो यस्तो निर्णय